Xasan Sheekh oo ka warbixiyay Safarkii uu ku tagay Imaaraadka – Radio Daljir
Xasan Sheekh oo ka warbixiyay Safarkii uu ku tagay Imaaraadka
Seteembar 1, 2015 2:24 b 0
Talaado, Sep 01, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtey magaalada Muqdisho, kadib markii uu soo dhameystey booqasho rasmi ah oo uu ku tegey dalka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu kula soo kulmay UAE.
Madaxweynaha ayaa intii u halkaasi joogay kulan rasmi ah la yeeshay dhaxal sugaha dowladda Imaaraadka Carabta, Sheikh Maxamed Bin Zayid Al Nahyan, oo ay ka wadahadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal.
Madaxweynaha oo xubnaha wafdigiisa ay ka mid ahaayeen Wasiirka Arrimaha Dibedda, Mudane Cabdisalaam Hadliye Cumar iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Cali Axmed Jaamac (Jangeli), ayaa sidoo kale xaley kulan gaar oo looga hadlayey dhinacyada ay labada dal sida dhow isaga kaashan karaan la yeeshay Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibedda ee Isutagga Imaaraadka Carabta, Dr Anwar Al-Gargarsh.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda Imaaraadka Carabta ayaa kulamadaasi isku afgartey in la kordhiyo taageerada la siinayo Soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska, kaabeyaasha dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee muhiimka ah.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo hoggaamiyeyaasha Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale kulamadooda uga wadahadley xal u helista mashaakilaadka ka taagan dalalka Carabta, gaar ahaan Yemen, iyadoo si gaar ah ay dowladda Soomaaliya u sheegtay inay taageersan tahay xukuumadda dalka Yemen ka dhisan ee uu horkacayo Madaxweyne Abd Rabbuh Mansur Hadi.
Kulamadaasi ayaa Madaxweynaha waxaa uu ku tilmaamey inay ahaayeen kuwo mira dhal ah, qiimo weyna ugu fadhiya qaranka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay Guddoomiyaha Baarlamanka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari, xubno ka tirsan labada gole, ururrada bulshada iyo mas’uuliyiin kale.
Iskuulada Waxbarasho ee Kenya oo Maanta Dib loo Furay
Maxkamadda Bristol UK oo Dib u Dhigtay Dacwad loo haysto Eedaysane Soomaali ah